Man United oo magaca ka badalaysa qayb garoonka ka mid ah - BBC Somali
Man United oo magaca ka badalaysa qayb garoonka ka mid ah
Kooxda Manchester United ayaa magaca ka badalaysa qaybta koonfureed ee garoon kooda si loogu maamuuso Sir Bobby Charlton oo ah ninka goolasha ugu badan u dhaliyay.
Gudoomiyaha kooxda Charlton oo 78 jir ah wuxuu Manchester United ku soo biiray 1953 wuxuuna u dheelay 758 ciyaarood, wuxuuna u dhaliyay 249 gool.
Magacaabitaankan ayaa hirgalaya ka hor ciyaarta Manchester United iyo Everton ee dhacaysa labada bisha afraad ee sanadkan, Bobby ayaa arrintan ku tilmaamay in ay sharaf wayn u tahay.
Gudoomiye ku xigeenka kooxdaasi Ed Woodward ayaa sheegay in Bobby uu yahay nin caan ka ah taarikhda kubadda cagta ee Ingiriiska.
Wuxuu intaas ku daray in uu yahay ciyaaryahan, dublamaasi, nin akhyaar ah oo aan ka daalin ka shaqaynta arrimaha samo falka, uuna wax kaste oo wanaag ah u matalo kooxda Manchester United.
Charlton waxa uu ka mid ahaa kooxdii England ee ku guulaysatay koobka adduunka sanadkii 1966, sidoo kale waxa uu afar koob oo horyaalka Ingiriiska ah iyo koobka Yurub la qaaday kooxda Manchester United.
Ciyaaryahankan ciyaaraha ka fadhiistay ee dhexda ka dheeli jiray wuxuu ka mid ahaa dad kii ka badbaaday masiibadii diyaaradda Munich halkaas oo ay ku dhinteen sideed ka mid ah saaxiibadii, arrintani waxay dhacday 1958.
Charlton oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Manchester United ay qayb muhiim ah ka tahay noloshiisa uuna xasuus wanaagsan qalbiga ugu hayo masraxan riyadda ama Theatre of Dreams.
Qaybta South Stand ee hadda loogu magacdarayo waa qaybta kali ah ee ka soo hartay dhismihii koobaad ee 1910 waxaana ku yaala meesha uu fadhiisto gudoomiyaha kooxda.